Khabiirka Cirka: CloudFlare Botnet
Waxaa jira adeegga botnet ee cusub oo weeraraya kooxo badan. Botnetka cusubi ma laha magac laakiin wuxuu keenayaa weeraro badan oo DDoS ah. Botnets waxay ka yimaadaan khabiiro IT-ga ah oo ka faa'iidaysta, khayaanada iyo fayrasyada si ay u qabtaan hawlo xun. Weerarka botnetka cusub wuxuu u dhaqmaa sida botnets oo kale, tusaale ahaan Mirae botnet - make logo with software. Shabakaddan oo ka mid ah boorsooyinka ayaa awood u leh in ay hoos u dhigto dhowr server oo goos goos ah. Isticmaalkan waa mid ka mid ah weerarrada ugu wayn ee Diidmada adeegga. Waxaa jira arrimo soo baxaya oo ku saabsan u nugulaanta qalabka IoT ee weerarkan. Qalabkaas ayaa la iibinayaa inta badan xilliyada kirismaska. Nik Chaykovskiy, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha, ayaa sharaxaya in muddadaa, khadkeeyayaasha ay fursad u heli karaan inay u diraan weeraro badan oo botnet ah oo loo adeegsado siyaalo kala duwan.
Bishii Nofeembar 23, CloudFlare waxay ogaatay weerarka khatarta ah ee botnetka oo kor u kacay 400Gbps iyo xaddiga yar ee 172Gbps. Waxay qaadatay khabiirada CloudFlare ku dhowaad 8.5 saacadood si ay uga jawaabaan weerarkan DDoS. Weerarka botnet waxay qaadatay in ka badan toban maalmood si ay u diidaan adeega qaar ka mid ah server-yada. Weerarkan botnet wuxuu isticmaalay qormooyin casri ah oo leh waxyaabo badan oo kala duwan oo ka yimid Mirae botnet. Tusaale ahaan, waxay lahayd daadadkii 3aad iyo daadadkii 4aad ee weerarada isku midka ah ee TCP. Waxaa jiray weerar lagu qaaday Jarmalka kaas oo horseeday Adeegga Diidmada adeegga ee macaamiisha Deutsche Telekom..
Botnets waxay saameyn kartaa adduunyada ciyaaraha
Noofambar Noofambar, waxaa laga yaabaa in garsoorayaashu ay ku dhacaan weerarrada shabakadaha qaarkood. Qaar ka mid ah Microsoft Xbox consoles ayaa la kulmay weerarrada noocaas ah. Xitaa shirkadaha Sony PlayStation ayaa weeraro ka soo qaaday mashiinnada botnet. Ganacsiyo badan oo guulo badan ayaa soo gaaray weeraro culus intii lagu jiray xilligii xafladaha.
Ganacsiyada ganacsiga leh websaydhada e-commerce waxay sidoo kale ku dhici karaan weerarada botnet. Haddii goobtu ay hoos u dhacdo, waxaa jiri kara horumar aad u xun oo ku yimaada dardargelinta kumbuyuutarka . Tusaale ahaan, darajada boggagaaga ayaa hoos u dhigi kara SERP. Xaaladaha kale, macaamiishu way lumin karaan kalsoonida boggagaaga, ugu dambeyntii waxay noqdaan macaamiisha tartankaaga. Qaar ka mid ah farsamada SEO-ku waxay isticmaalaan isticmaalka weerarada botnet ee goobtaada tartanka. Farsamooyinkan khadadka madow waxay caawiyaan weerarrada xun inay galaan nidaamyada u nugul.
Ganacsi kasta oo ganacsi e-ganacsi wuxuu u baahan yahay inuu ka warqabo weerarrada internetka kuwaas oo khatar gelin kara dadka isticmaala. Waxaa jira baahi weyn oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u helaan hababka ugu wanaagsan ee looga ilaaliyo shabakadahooda ka imaanaya gaadiidka botnet. Waayadii dhawaa, weeraro badan oo diidmo ah oo ay la kulmayaan adeegayaashu waxay ku guuleysteen. Ganacsiyada ayaa ka imanaya khasaare aad u weyn weerarradan. Waxaa jira shabakado badan oo kombuyuutarada Zombie ah oo weerara shabakadaha kombiyuutarada. CloudFlare waxay la kulmeen weerar udhacay hawlaha shirkadooda. Ganacsiyada badankood waxay ku xiran yihiin weerarradan. Waxaad heli kartaa habab cusub oo loola tacaalayo nooca weerarka ee tilmaamahan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in laga saaro gaadiidka botnet ee server-kaaga.